🥇 ▷ Falanqaynta Daraasada 2 ✅
Falanqaynta Daraasada 2
Deck 13 wuxuu ku soo laabanayaa dacwadda ‘Surge 2’, oo leh soo jeedin ARPG oo si cad loogu dhiirrigeliyay cinwaannada ‘Ka soo baxa Software’, laakiin markan iyo kiiskii qayb labaad, dib uma qaadan karno tixraac kasta oo Madoow ah, haddii kale. saadaalintiisa, oo uu wax badan la wadaago. Akhbaarta ama ka go’naashaha buugga yar iyo ka sii wanagsan ayaa ah shahaadooyinka ugu fiican ee daraasadda lagu soo bandhigayo cinwaankan, laakiin ma ku filan tahay?
Xaqiiqdii waxaan u arkaa nafsadeyda inuu yahay taageere buuxda ee The Surge, waxkasta oo ku xeeran goobta shirqoolka iyo farsamadiisa dagaalka, taas oo ka dhigaysa mid aan caadi aheyn oo xiiso leh, oo leh mustaqbal mustaqbal leh oo runtii ka dhigaya mid gaar ah. Waa inaan runtii maskaxda ku haynaa in Deck 13 ay abuurtay duni aad u xiiso badan oo apocalytic ah waqtiganna waxay sii fogeyn doontaa dooda iyo xaalkeeda xitaa, iyada oo la adeegsanayo xog badan oo dheeraad ah oo noo oggolaan doonta inaan buuxinno nusqaamaha kuwa hore u jiray Cinwaanka, kaas oo, waxaan kugula talineynaa ciyaarista, kaliya maahan tayadiisa, laakiin shirqoolka, kaas oo dhamaadka uu ku dhammaado wax lala yaabo.
Qalliinka 2, dhulku wuxuu dhammaystirayaa ilaha dabiiciga ah. Asal ahaan wax waluba waa cadaabta. Taasi waa sababta CREO, oo ah shirkad farsamo oo farsamo, ay u dejisay inay badbaadinto, hagaajiso xaaladeeda dabiiciga ah, laakiin isku daygaas, waxay si qoto dheer ugu fashilmeen, ma aha oo kaliya inay dadajiso hawsha, laakiin sidoo kale soo bandhigaan shar aan horay u jirin, oo ah nano -machines-ka. Qeybtii ugu horreysay, dhankastaba waxay ku jirtay gudaha xarumaha CREO, oo aan uga baxnay iyadoo aan wax walba duminay oo aan ku eedeynay milkiilayaasha howshaas kuwo waalan. Munaasabadan, musiibadaani waxay ku dhacdaa magaalo dhan: Magaalada Jeriko, oo ay ka muuqato suuska tikniyoolajiyada, oo ay weheliso riyooyinka “baabi’inta” cudur ay sababaan mashiinada nano-mashiinka ah ee sababay in bulshada si ficil ahaan loo burburiyo.
Waxaa laga yaabaa in tani ay aad u weynaato, maxaa yeelay halyeeygayaga, oo lagu beddeli karo munaasabadan, xitaa xirfaddiisa, ayaa Yerixoo imaan doona laba bilood ka hor dhibaatada, haa… shil diyaaradeed iyo badbaadin gaar ah oo naadir ah. Waa wax aan caadi ahayn, waxaan ka bilaabi doonnaa saldhiga booliiska, halkaasoo nalagu xiray, annagoo ka toosayna kooma qoto dheer. Qalliinka 2-aad wuxuu u bilaabmayaa sidan: Xagee aan ku soconnaa? Nagu saabsan? Muxuu yahay mustaqbalkeenna nolosha? Runtu waxay tahay inaannaan ogaan doonin illaa dhammaadka, laakiin waxaan haysannaa xubno badan oo xiran si aan halkaas u gaarno, marka waxaan kuu sheegi doonnaa wixii aan ka aragnay falanqayntaan.
Runtu waxay tahay inbadan oo fiidiyowyo iyo shaashadyo hore ah ee horey loogu arkay qalliinka ‘Surge 2’ aad ayey u yaaban yihiin garaaf ahaan, wax nasiib darrose uma dhaqaaqin cinwaanka. Qaybtan labaad farsamo ahaan uma cusbooneysiineyso kaliya tan koowaad. Waxaad si cad u arki kartaa talaabada kore ee saamaynta, joomatari ama muuqaallo, kuwaas oo leh qaab dhismeedyo gaar ah marka loo eego shaqooyinka, laakiin ma ahan kuwa naxdin ku ah shaashadda.
Jidka Mashiinka ee loo adeegsado ‘Deck 13’ waa inuu qaadaa tallaabo weyn jiilka soo socda, maxaa yeelay inkasta oo hadda loo muujiyey inuu sax yahay, habka loo bixiyo uma muuqdo inuu ku gaarayo saameynta lagama maarmaanka u ah shaashadda. Waxaan sharraxnay: Darajada 2 waa ku-dhawaad ​​qaybtan. Ciyaarta ayaa kaliya “miisaan” 7.8Gb, ku dhawaad ​​la mid tan tii hore. Maahan wax dhib ah ama dhaleeceyn ah, aad ayey u yar tahay, run ahaantii natiijada waa mid si muuqata la yaab u leh, laakiin waxay umuuqataa inaad dooneysay inaad hal talaabo hore u qaado oo aad ka furto qeybtaan, faahfaahinta ku jirta qaabeynteeda ayaa soo gaartay.
Xbox One X waxaan ku leenahay labo qaab sida ay uga soo gudbeen daraasadda, mid tayo sare leh, oo leh 4K dib loo hagaajiyay iyo 30fps, ama wax qabad, marka loo eego 1080p iyo 60fps. Muuqaalka tayada waxay umuuqataa inay aad uga fogtahay halka loo yaqaan 4K, halkii ay aheyd 1440p, laakiin taa badalkeeda waxaan lahaan doonaa hoosooyin aad u badan oo qeexan oo xoog badan iyo laydh, laakiin taasi kama hor imaaneyso dheecaan aad uqurux badan 60 lakab oo sekan ah, in dagaal kulul ayaa luul. Xitaa sidaas oo ay tahay, cinwaanka ayaa looga haray inuu ka ciyaaro labada qaab midkood. Tusaale ahaan, kiiskeyga, wax yar ka hor cadowga oo ay adag tahay in la dhaafo waxaan doortay in aan iska beddelo 60 fps, in aan sifiican u dareemo falcelinta.
Dhinac kale oo ay adag tahay inaysan jirin wax war ah oo ku saabsan tan koowaad waa codka. Way fiicantahay oo qabow in la ixtiraamo qaar badan oo ka mid ah saameynta ugu fiican ee la yaqaan ama xitaa heesaha asalka u ah ciyaarta, laakiin heysashada qeybtii ugu horreysay ee aad ugu dhow (qabow sababtuna tahay labada ballaarintiisa), waxaan xusuusineynaa marka laga reebo maamulayaasha ugu dambeeya, The Surge 2 ma laha muuqaal muuqda oo aad u wanaagsan, laakiin sidoo kale ujeedka lagu dayactirayo jawiga “jilicsan, mugdi iyo jajaban” ayaa sharxi kara dareenkaas.
Ugudambeyn, waxay kugu tageysaa dareen ah in wax waliba si sax ah u shaqeeyaan, inaadan u baahnayn wax kale oo aad ku raaxeysato, laakiin waxoogaa ayey kaa xumeysaa inaad aragto in dareenka qaar ka mid ah uu si lama filaan ah u lumiyo xuruufta jilayaasha, in wali ay leedahay kutaan ahaan qaar ama kaameeraha lagu meeleeyo sida ugu xun ee suurta gal ee animations fudud sida wiishka wiishashyada. Sababta oo ah Surge 2 wuxuu leeyahay iftiin aad u xiiso badan, gudaha gudaha waxaan xitaa u isticmaali karnaa iftiinka qulqulatadayada iyo wixii ka sii sareeya, dhaqdhaqaaqa dagaalka ayaa ah mid aad u wanaagsan oo la daawado.
Haddii aad ku aragtay xoogaa xanuun ah dib-u-fiirinta illaa iyo hadda, qaybtani waxay ka qaadi doontaa dhammaan sharkaga, maxaa yeelay Qalliinka 2 waa mid sifiican loo arki karo. Halkan waxaa ku jira horumar la taaban karo oo la xiriira kuwii hore. In kasta oo farsamo ahaan iyo inbadan oo muuqaal ah ay isku mid yihiin, haddana waxaan haysannaa fursado badan oo dagaal ah oo aan ugu mahadnaqeyno halganka ay ka heleen diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee loo yaqaan ‘Drones’, kaas oo hadda yeelan doona adeegyo badan iyo kaniisado, oo leh nidaam aad u fudud oo la raaco taasna ayaa na badbaadin doonta. badan oo nacayb ah dagaalka
Cinwaankii ugu horreeyay ayaa horay looga duulay labadan astaamo, laakiin ugu dambeyntiina waxaa loogaga dhigay si aan macquul ahayn sababtoo ah isticmaalkooda yar ee iskahorimaadka kaas oo ah cadowga cadawga isla markiiba ku dili kara. Hadda drone wuxuu noqon karaa qori, qoriga hoosaadka qoriga hoostiisa ama xitaa qoryaha dab fudud, si aan u siino tusaalooyin qaar, maadaama cadawgu hadda sidoo kale lahaan doono hub isla markaana waxaan ubaahan doonaa hab wax ku ool ah oo difaac.
Sheeko kale ayaa ah Nidaamyada hagidda jihada hagaya, ka hor intaanan sidoo kale xannibi karin oo aan ka hortagno, laakiin hadda laga bilaabo daqiiqadda ugu horeysa waxaan heli doonnaa xirfad muujineysa halka ay ku dhufteen cadawgu, iyadoo badhanka qufulku aanu joojin doonno dharbaaxada, haa, laakiin haddii aan u adeegsanno xuquuqda joystick si loo hago xannibaaddaas oo aan ku qabanno waqtigeedii saxda ahaa, waxaan ku bilaabi doonnaa kaniisadda, taasoo faa’iido weyn leh.
Qalliinka 2 ayaa shaki la’aan ah. Way adag tahay. Aad ayaan u dhintay. Waxbadan oo xoogaa ku filan. Laakiin sidaas oo ay tahay, marna uma muuqato inay leedahay iska hor imaadyo aan macquul aheyn ama xaalado aan dabooli karin oo waxaad moodaa inay waxyar ka “saaxiibsan” yihiin kuwii hore. Ikhtiyaarka aan ku dhamaan doono isticmaalka haddii aan ka gudbi karin aag gaar ah waa talo bixin badan: dulqaad yeelo. Qasab kuma aha inaan iska hor imaano dhowr cadaw oo moodaya inay tahay wadada kaliya. Gaar ahaan markii dhowr cadow isku mar la wadaago isla waqtigaas, maadaama ay hadda u muuqdaan inay si aad ah uga fiirsanayaan agagaarkooda – gaar ahaan kuwa wax liita.
Sababtoo ah dareenka awooda leh hannaan kasta oo hub ama hub cusub ayaa weyn. Waxaan dareemaynaa kalsooni (dareen halkaan gal) markasta oo aan iska iloobo cadaawayaasheena si aan u helno xoogaa hub ah oo ay xidhaan. Waxay u dhowdahay sida wax soo iibsashada: lug, gacan, lug to… dhammaan waa la heli karaa oo waa loo heli karaa wixii exoskeleton ah. In yar in yar ayaanu abaabulnaa hubkeenna, kaas oo leh tafaasiil xiisa leh munaasabadan, maxaa yeelay qaadista gogoldhig buuxa oo ah 6 gogo ‘ayaa ina siin doona gunno, qaadashada 3 ayaa sidoo kale samayn doonta illaa xad kayar, laakiin waxaan isku dari karnaa sedex kale xabbadood oo ka socda ururinta kale si ay u ururiyaan laba wax ku xoojiyayaal ah wax siiya ciyaar badan. Hadana hadaan haysano, waa inaan sii wadnaa sameynta si aan u ururinno qaybo si aan ugu abuuri karno CentroMed oo aan ka heli doonno khariidada oo dhan. Intaa waxaa dheer, sidii sheeko cusub waxaan badbaadin karnaa ilaa 3 astaamood oo ah maqaar-galinta qalabka-hubka, haddii aan u baahanahay inaan u badalno mid ka fudud mid xawaare dheeri leh leh ama xoog badan oo culus “duulaan” ah.
Cilmiga cusub ee dagaalka ayaa ah mid wax ku ool ah oo muhiim ah isticmaalka korantada tamarta. Kaliya maahan inaan maaraynno nolosha iyo xasilloonida, Tamarta ayaa noo anfici doonta wax badan oo ku abuurma maqaar-cusub, kaas oo u beddelaya qayb kasta oo gunta u leh nolosha. Sideen u buuxin karnaa tamarta? Hagaag, dagaalka. Taasi waa, inta aad la dagaallanto, nolosha kaydka badan ee aad lahaan doontid – marwalba leh heerka xad-dhaafka ah – sababta oo ah wax walba ayaa lagu hagaajiyaa qaybtaan. Markii aan horay u soconney waxaan sidoo kale heli doonnaa qalabka lagu keydiyo nolosha ee noo oggolaanaya inaan ku noqonno nidaamka koowaad ee Surge, haddii aan door bidno.
Hadana haddii mugdi kugu jiro waad ku raaxeysaneysaa jidadka gaagaaban ee kuu saamaxay inaad ku laabato meesha aad ka bilawday ama meelaha kale si la yaab leh, in mashiinka ‘Surge 2’ loo yaqaan ‘Wadada Mashiinka’, maahan wax aan micno lahayn, maxaa yeelay khariidaynta ciyaarta Deck 13 waa mid cajiib ah. Tan kaliya maahan “jid-gooyooyinka” aan horay u aragnay, laakiin sidoo kale sababtoo ah xitaa waxay noo oggolaan doontaa inaan hore ugu dhaqaaqno meelaha qaarkood adigoon horey u soo jiidan cadawga, laakiin aan qaadno dariiqooyin kale si aan uga baxno ilaalinta. , dami qaylo-dhaanta shaqada iyo awoodda tag oo aad u baabi’iso iyaga mid mid.
Nasiib wanaagse, Qalliinka 2 ma jiraan badiyaa sida aag kale oo kale waxaana haysannaa khariidado kuwa ah “waxaad halkaan u joogtaa” si ay noogu hagaan, laakiin in ka badan hal dhacdo ayaa xitaa buux dhaafiyey xaddiga sibidhada, wiishashka iyo wiishashka waxaa jira… ilaa aad ka furaysid oo aad fiirsatid (emayl la ilaaliyo) waxay yihiin.
Qalliinka 2-ka, waxaan haysan doonnaa xulashooyin badan oo aan ugu raaxeysan karno xaaladda RPG-gaaga. Tan hore waxay muujisay baahi la’aan NPCs ama howlo dhinaca, oo aad uga qarsoon isha qaawan, markaa hadda waxaan heysan doonnaa miis aan ku raacno iyaga iyo noocyo kala duwan oo ay ka mid yihiin, wadahadallo la heli karo, qaar ka mid ah howlaha qashin-qubka, laakiin iyagu xitaa ma dhibayaan midna. iyagu waa waajib. Kama hadlayno horumarada murugsan ama wadahadallada qotada dheer, waxay nolosha oo dhan u keenaan nolosha oo keliya waxayna kugu dhiirrigelinayaan inaad sahamiso meelaha qaarkood ama dib ugu laabato kuwii hore si aad u noqoto qof fiiro gaar ah leh.
Noocyo kale oo cusub oo ah “Surge 2” wuxuu soo bandhigayaa waa nidaam internet ah oo iskaashigu uusan ku jirin, laakiin haddii si uun ay ciyaartoydu uga bixi karaan rinjiyeerka masraxa si ay noo siiyaan tilmaamo… ama noo dhumiyo. Ma dhihi doono waxaan ku dhacay god si aan ugu fiirsado tilmaame leh caano aad u xun, maxaa yeelay waligeed ma dhicin – ma ahan mid bilaa caqli badan, laakiin waxaan kaaga digayaa in aan qiimeyn karno wax qorista iyo kuwa aruurin kara shaqooyin dheeri ah cimilo badan. Laakiin taas kaliya maaha, waxay ku jiraan nooc ah “meel dhuumasho” oo ku saleysan avatars, oo aad u qosol badan. Eeg haddii ay jiraan geesood, oo aan ku soo dayn karno nooca Beakton oo leh astaamahayaga. Haddii saacad gudaheed qofna taas ka helin, waxaan qaadanaa 5000 halbeeg oo bir bir ah, oo fudud, sax ah? Sida iska cad, haddii aan helno bayaan kale oo qarsoon, waanu qaadanaynaa.
Maxaad u jeeddaa Waxaan saaray yoya oo madaxaaga jeexay…
Waxyaabaha la aruurin karo waa kuwa aan jirin, maxaa yeelay waxaa jira waxyaabo badan oo horey loogu faafiyay khariidadda, in kasta oo aan tixgelin karno feylasha maqalka ah sida, sababtoo ah halka ay jiri doonaan qaar aan faaido lahayn, waxaa jira kuwo kale oo aad u xiiso badan, kuwaas oo noo sheegi doona siraha adduunka ku saabsan. of Surge 2. Dhamaan heerarkan cusub ee noocan oo kale ah waxay ina siin doonaan saacado badan oo ciyaar ah, laakiin waxaan wali ku dhownahay 25-30 si aan uga gudubno sheekada ugu weyn, had iyo jeer waxay ku xiran tahay waxa kugu kacaya inaad ka adkaato cadawga.
Marka la soo koobo, buugaagta cusubi waa: magaalo cusub, culeys dheeri ah, goobo bulsheed, hawlgal dhinac ah, noocyo cusub oo hub ah, nidaam dagaal oo horumarsan… Waxaan u maleynayaa inaysan muhiim aheyn inaan sii wado in la yiraahdo ‘Surge 2’ wuxuu wax walba ku horumariyaa marka hore, marka laga reebo qaybta garaafka, oo umuuqata inay waxyar uun iska dhicisay, laakiin in kasta oo ay jirto, uma baahnin wax badan oo aan ku raaxeysano nooca ficil ee aan caadiga ahayn ee ah “nafaha” ay bixiso.
Shakhsi ahaan, waan jeclahay Surge-ka. Waxaa jira meel muhiim ah oo nafsi ah oo qarsoon oo ku dhex jirta dabeecaddeenna si uusan uga fikirin inuu ka jaro xubnaha cadowgiisa naxariis la’aan si uu u kala jaro. Waan ognahay in mustaqbalkiisa dambe kadib uusan jirin wax naxariis ah, laakiin dareenka ah in ciyaartoygu uu yahay mashiin dilaa ah oo gabi ahaanba dilaa ah oo u eg haan lugaha lugaha ku leh aan qiimo lahayn. Qaabka hubku waa mid aad u fiican, laakiin waxaan jecelnahay hub badan iyo muuqaalkoodaba aad iyo aad ayaan u jeclahay: suumanka madaxa goynaya, faashash Mohican, dubbe weyn oo guluub leh … waxaa jira waqtiyo aad ka fikirto bal inay run ahaantii sababaan weyn waxyeelada ay gaystaan.
Tan kaliya maahan, isku xirnaanta masraxa qalliinka ‘Surge 2’ waa mid weyn, oo hadda uma baahna inay isticmaalaan waddooyinka warshadaha ee ugu badan kii hore isticmaalkaas. Waxay leedahay qaabab gaagaaban oo aad u tiro badan oo sii wata si la yaab leh inta lagu jiro ciyaarta iyo waxa ka sii fiican, waxay ku dhiirigelisaa ciyaaryahanka inuu sahmiyaa, sababtoo ah waxaa jira waxyaabo qarsoon oo ku yaal geesaha ugu fog ee aad qiyaasi karto. Xarig walbana wuu yaryahay.
Deck 13 ayaa ka dhigtay Surge 2 mid kaamil ah isla markaana horumarisa kan ugu horreeya siyaabo badan, laakiin farsamo ahaan waxay ku dhacdaa waxyar oo ka hooseeya wixii la filaayay. Cinwaan laqaban karo oo aan si qiiro leh ugaga hadlayno ayaan ka dhigi karnaa tiro yar. Maahan wax aad u fiican, laakiin haddii aad jeceshahay dhedig, waa lama huraan.